Commission Scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ) | BLI Zvikoro zvemitauro muCanada
Zvirongwa zvePathwayCommission Scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ)
Nzira yako yekuCanadaCommission Scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ)
Commission Scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ) yakasikwa neHurumende yeQuebec panguva yekumisikidzwa kwemabhodhi echikoro pane mitauro muna Chikunguru 1, 1998. Yakagadzirwa neJérôme-Le Royer School Board.
Mu2017-2018, Commission Scolaire de la Pointe-de-l'Île yakapa masevhisi kuvadzidzi vanopfuura 43,600, vanosanganisira 22,386 muchikoro chepuraimari uye chepuraimari, 10,765 kuchikoro chesekondari, 5,925 mudzidzo yevakuru uye 4,528 mukudzidzira basa. Ine vashandi vanodarika zviuru mazana manomwe nemazana matatu uye bhajeti remamiriyoni mazana matatu nemakumi masere emadhora.
CSPÎ ine 40 chikoro chekutanga, 7 zvikoro zvepamusoro, zvikoro 4 zvakasarudzika (zvekutanga uye sekondari) zvevadzidzi vane zvinonyanya kugadziriswa zvinonetsa, nzvimbo gumi dzedzidzo yevakuru (general kana kudzidziswa basa), bhizinesi service centre neCentre régional de malekwa kure du Sekuru Montréal.
Inowanikwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwechitsuwa cheMontréal, iyo CSPÎ inofukidza nzvimbo yemamita makumi maviri nemapfumbamwe emakiromita, inosanganisira nzvimbo dzeguta reMontréal-Est uye nzvimbo ina dzeMontréal, Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles, Saint- Léonard, Anjou uye Montréal-Nord
Commission Scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPÎ)Mamwe mashoko
SANGANO RENYAYA DZESVONDO DZESVONDO
Ichi chirongwa chinokugadzirira iwe kushanda semagetsi mechanic mune automated system.
Inopa ruzivo uye inovandudza hunyanzvi uye hunhu hunodiwa kushanda uye kuchengetedza michina yekugadzira yemagetsi; inokanganisa masisitimu akasiyana siyana uye akasiyana siyana meakisi, hydraulic, pneumatic, magetsi nemagetsi zvikamu; uye shanda mumhando dzakawanda dzemakambani anogadzirisa uchishandisa automated control system.
KUSIMBIRA UYE KUKOSHESA
Ungana uye unganidza welded simbi kana aluminium zvikamu zvinoenderana zvirongwa uye mirairo.
Shanda uye gadzirisa maturusi akasiyana emuchina wekucheka kana kukwesha simbi, mapurasitiki kana zvimwe zvinoshandiswa zvichienderana nehurongwa uye mirairo Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti panzvimbo yedu yekudzidzira hunyanzvi hwese hunopihwa muhurukuro uye ASI kudzidziswa kwakasarudzika.
Ita kuongorora, kugadzirisa uye kugadzirisa basa pane zvakasiyana zvikamu zvemotokari.
Ichi chirongwa chinotungamira kune diploma yehunyanzvi zvidzidzo (DEP) mune zvemotokari mechanics.
Basa rekugadzira graphic dhizaini rinosanganisira kugadzira magwaro ekuona ayo anosanganisira zvinyorwa, mifananidzo uye mifananidzo inoitirwa kudzokororwa pane dzakasiyana midhiya senge mapepanhau, nemagazini. Iyo grafiki dhizaini inogona zvakare kupindawo mukugadzirwa kwemagetsi zvinyorwa izvo zvinozogoverwa pamawebhusaiti akasiyana mapuratifomu akadai semakomputa, smart phone, mahwendefa edhijitari, vaverengi nevamwe. Mabasa ebasa anoitwa munzvimbo yakanyanya komputa iyo inoda kudzidziswa kwakanaka. Iyo graphic gadzira inofanirwa kushanda nekombuta, graphic matafura, nyanzvi software yekubika desktop uye webhu uye akasiyana anodhinda. Kunyanya zvakananga, mabasa emakomputa ekugadzira mifananidzo ane:
gadzira zvimiro zvehurongwa
wana mifananidzo yakasiyana-siyana (kutora mifananidzo, digitization, nezvimwewo)
gadzira uye shandura mifananidzo uye mifananidzo
gadzirira zvinyorwa zvekudhinda kana kugovera zvemagetsi
gadzira zvimiro zvekudhinda kana kugovera zvemagetsi
ita zviyero zvemitengo uye nguva yekushanda uchitsamira pamapurojekiti akafungidzirwa kwairi
Iyi 1800-awa yekudzidziswa kosi ichakupa iwe ruzivo uye hunyanzvi hwakakosha kuti ushandise typographical mitemo, nheyo dzekutaurirana kutaura, kugadzirira kuseka, kugadzira mifananidzo uye kugadzirisa mifananidzo uchishandisa komputa, mamisirwo emavara mavara ekudhinda kana emagetsi. kugovera, kuisirwa uye kupedzisa magwaro, kugadziridzwa kwemavhidhiyo, mashandiro ekushambadzira desktop, kushandiswa kwezvinhu zvekufonera, kushungurudza kompuuta yekushandira komputa, kuongororwa kwemhando yegwaro uye kushanda pamwe.
Iva neyakagadziriswa French B2 mwero
Uchapupu hweMari huwandu